ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान कसरी हुन्छ ? ऊर्जा मन्त्री भुसालले उद्योगीहरुलाई यस्तो भनिन् - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान कसरी हुन्छ ? ऊर्जा मन्त्री भुसालले उद्योगीहरुलाई यस्तो भनिन्
काठमाडौं/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्पा भुसालसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको हो ।
उर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघकातर्फबाट अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिक बधाई दिए । भेटवार्तामा क्रममा महासंघकातर्फबाट ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिईयो ।
महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/ विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने बताए । साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिए ।
महासंघकातर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आइरहेको भएता पनि छुट बिल÷रकम भनी करोडौ÷ अर्वौ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएको बताएका छन् । यसर्थ विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।
आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ ।
# पम्पा भुसाल